Amụma Nzuzo ▷ Discover Online Online ➡️
1 Iwu nzuzo
1.1 Na-ezipụ ma dekọọ data izugbe
2 Izi ezi na izi ezi nke data
3 Mmega ikike nke nnweta, ndozi, kagbuo ma ọ bụ mmegide
4 Nnabata na nkwenye
5 Mgbanwe na iwu nzuzo a
Nke a abụghị naanị amụma nzuzo, ọ bụ nkwupụta nke ụkpụrụ.
Dịka onye na-elekọta weebụsaịtị a, achọrọ m inye gị nkwa kachasị ukwuu nke iwu gbasara ihe gbasara nzuzo gị ma kọwaara gị nke ọma dịka o kwere omume, ihe niile metụtara nhazi nke ozi onwe gị na weebụsaịtị a.
Amụma nzuzo a ga-arụ ọrụ naanị maka data enwetara na weebụsaịtị, na-agaghị emetụta maka ozi ahụ ndị ọzọ na-anakọta na weebụsaịtị ndị ọzọ, ọbụlagodi ma ọ bụ weebụsaịtị wee jikọta ha.
Ọnọdụ ndị a bụ iwu maka onye ọrụ na onye na-elekọta weebụsaịtị a, yabụ na ọ dị mkpa ka ị were nkeji ole na ole gụọ ya ma ọ bụrụ na ekwenyeghị na nke a, ezigala ozi nkeonwe gị na weebụsaịtị a.
Ewelitela iwu a na 25/03/2018
Maka ebumnuche nke usoro ahụ e hotara na nchekwa banyere Nchedo nke data nkeonwe, a ga-etinye data nke ị zitere anyị na Faịlị nke "USERS OF WEB and SUBSCRIBERS", nke Servicios Telemáticos SL nwere NIF: B19677095 yana Adreesị na C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada). Faịlị a emejuola usoro nchekwa na nhazi otu amapụtara na Royal Iwu 1720/2007, nke mmepe nke LOPD.
Na-ezipụ ma dekọọ data izugbe
Izipu ozi nkeonwe na webụsaịtị a bụ ihe amanyere iji kpọtụrụ, kwuo, denye aha na Disco.online blog, wepụta ọrụ gosipụtara na webụsaịtị a wee zụta akwụkwọ na usoro dijitalụ.
N'otu aka ahụ, ịnyeghị ozi nkeonwe achọrọ ma ọ bụ ịnakwere iwu nchebe data a na-egosi na ọ gaghị ekwe omume ịdenye aha na ọdịnaya yana ịju arịrịọ ndị a rịọrọ na weebụsaịtị a.
Ọ dịghị mkpa ka ị nye data nkeonwe ọ bụla maka ịgagharị na weebụsaịtị a.
Kedu data nke weebụsaịtị a chọrọ na maka ebumnuche ya
discover.online ga-anakọta Data nkeonwe nke Ndị Ọrụ, site na ụdị ntanetị, na Internetntanetị. Ozi nkeonwe anakọtara, dabere na nke ọ bụla, nwere ike ịbụ, n'etiti ndị ọzọ: aha, aha nna, email na njikọ njikọ. N'otu aka ahụ, n'ihe gbasara ọrụ nkwekọrịta, ịzụta akwụkwọ na mgbasa ozi, m ga-ajụ Onye ọrụ maka ụfọdụ ụlọ akụ ma ọ bụ data ịkwụ ụgwọ.
Weebụsaịtị ga-achọ naanị data zuru oke maka ebumnuche nnakọta yana o nyefere nkwa:
Belata nhazi nke data onwe.
Pinye data nkeonwe dịka o kwere omume.
Nye nghọta n ’ọrụ na nhazi nke data nkeonwe na-arụ na weebụsaịtị a.
Kwe ka ndị ọrụ niile nyochaa nhazi nke data ha na-eme na weebụsaịtị a.
Mepụta ma melite akụkụ nchekwa iji nye gị ọnọdụ nchọgharị kachasị mma.
Ebumnuche nke data anakọtara na Portal a bụ ndị a:
Iza ihe ndị achọrọ nke ndị ọrụ es. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ọrụ ahapụ ozi nkeonwe ha na ụdị nke kọntaktị ọ bụla, anyị nwere ike iji data a zaghachi arịrịọ gị ma zaghachi obi abụọ ọ bụla, mkpesa, nkwupụta ma ọ bụ nchegbu ị nwere ike ịnwe gbasara ozi gụnyere na saịtị. Weebụ, ọrụ ndị enyere site na weebụsaịtị, nhazi nke data nkeonwe gị, ajụjụ gbasara ederede iwu dị na weebụsaịtị, yana ajụjụ ọ bụla ị nwere.
Iji jikwaa ndepụta ndenye aha, zipu akwụkwọ akụkọ, nkwalite na onyinye pụrụ iche, na nke a, anyị ga-eji adreesị ozi-e na aha onye ọrụ nye ya mgbe ị na-eme ndenye aha.
Imeghari oke na ịzaghachi ihe ndị ọrụ kwuru na blog bụ.
Iji kwe nkwa nrube isi na ọnọdụ ojiji na iwu dị. Nke a nwere ike ịgụnye mmepe nke ngwaọrụ na algọridim na-enyere weebụsaịtị a aka ịkwaa nzuzo nke data nkeonwe ọ na-anakọta.
Iji kwado ma melite ọrụ nke weebụsaịtị a na-enye.
Iji kwado ngwaahịa na ọrụ enyere na webụsaịtị a.
N'ụfọdụ, ozi gbasara ndị ọbịa na saịtị a na-ekekọrịta na-enweghị aha ma ọ bụ soro ndị ọzọ dị ka ndị mgbasa ozi, ndị nkwado ma ọ bụ ndị mmekọ maka naanị ebumnuche nke imezi ọrụ m na monetized weebụsaịtị. A ga-ahazi ọrụ ndị a niile dị ka usoro iwu si dị, a ga-akwanyekwara ikike gị niile gbasara nchekwa data dabere na iwu dị ugbu a.
N'okwu nke ọ bụla, onye ọrụ nwere ikike zuru oke gbasara data onwe ha yana ojiji ha nwere ike igosi ha n'oge ọ bụla.
Na agbanyeghị na ebe nrụọrụ weebụ a ga-ebufe data nke ndị ọrụ ya na ndị ọzọ na-ebughị ụzọ gwa ha ma rịọ nkwenye ha.
Ọrụ ndị ọzọ nyere na webụsaịtị a
Iji nye ọrụ dị oke mkpa maka mmepe nke ọrụ ya, Serntanetị Servicios Telemáticos SL na-ekenye ndị na-eso ya data n'okpuru ọnọdụ nzuzo ha kwekọrọ.
Ntọala ntanetị: WordPress.org
Ọrụ ozi na izipu akwụkwọ ozi: MailChimp 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308.
Nchekwa igwe ojii na nkwado ndabere: Dropbox -Drive, Wetransfer, Ọrụ Ntanetị Amazon (Amazon S3)
Usoro njide data nkeonwe nke weebụsaịtị a na-anakọta
Weebụsaịtị a na-eji sistemụ ichekwa ozi gbasara onwe dị iche iche. Weebụsaịtị a na-achọ nkwenye tupu oge nke ndị ọrụ hazie data onwe ha maka ebumnuche egosipụtara.
Sistemụ maka inwude ozi nkeonwe nke ji achọpụta.online :
Mpempe akwụkwọ ndenye aha ọdịnaya N'ime weebụ enwere ụdị dị iche iche iji mee ka ndenye aha rụọ ọrụ. Lee igbe mbata email gị. Onye oru gha ekwenye na ndenye aha ha iji kwado adreesị ozi-e ha. The data nyere ga-eji nanị izipu Akwụkwọ Akụkọ na-eme ka ị na-emelite na ozi ọma na kpọmkwem na-enye, nanị maka ndị debanyere aha nke es. A na-ejikwa Akwụkwọ Akụkọ ahụ MailChimp
Mgbe ị na-eji ọrụ nke MailChimp ikpo okwu maka ịme mkpọsa ahịa email, njikwa ndenye aha na izipu akwụkwọ akụkọ, ị kwesịrị ịma na MailChimp O nwere ndi sava ya na-akwado ya na US ma ya mere data nke onwe gị A ga-ebufe ha na mba ọzọ gaa na mba echere na enweghị nchebe mgbe mgbasa nke Ọdụ Nchekwa mgbasa. Site na ndenye aha, ị na-anabata ma kwenye data gị site na ikpo okwu nke MailChimp, nke dị na United States, iji jikwaa izipu nke akwụkwọ akụkọ kwekọrọ. Mailchimp na-emegharị gaa na ọkọlọtọ ọkọlọtọ EU na nchekwa data.
Mpempe nzaghachi: Weebụsaịtị nwere ụdị ikwu post. Onye ọrụ nwere ike biputere kwuru na posts ndị ebipụtara. A ga-eji data nkeonwe tinye n'ụdị iji tinye ihe ndị a na-ekwu naanị na-agabigaghị ma bipụta ha.
Mkpọtụrụ Mkpọtụrụ: Enwerekwa ụdị kọntaktị maka ajụjụ, aro ma ọ bụ kọntaktị ọkachamara. N'okwu a, a ga-eji adreesị ozi-e zaghachi ha ma zigara ozi onye ọrụ ahụ chọrọ site na weebụ.
kuki: Mgbe onye ọrụ debara aha ma ọ bụ ịchọgharị weebụsaịtị a, echekwara 'kuki' Onye ọrụ ahụ nwere ike ịlele nke ahụ iwu kuki ịmụba ozi banyere iji kuki na otu esi ewepụ ha.
Nbudata Sistemụ: Na weebụsaịtị a ị nwere ike ibudata ọdịnaya dị iche iche na-etinye oge niile na ederede, vidiyo na usoro ọdịyo. N'okwu a, achọrọ email iji rụọ ọrụ ndenye aha. Ejiri ozi gị maka ebumnuche egosipụtara maka ndị debanyere aha.
Ire ere: Site na Portal ị nwere ike ịzụta mbipụta na infoproducts si Online Servicios Telemáticos SL, na nke a, a chọrọ ozi maka ndị na-azụ ihe (Aha, aha nna, na akara ekwentị, adreesị nzipu ozi na ozi e-mail) site na ikpo okwu Paypal dị ka ụdị ugwo.
Ndị ọrụ nwere ike wepu aha n’oge obula nke ọrụ enyere site na Discover.online otu Akwụkwọ Akụkọ ahụ.
Onye ọrụ ahụ ga-ahụ n'ime saịtị a, ibe, nkwalite, ndị nkwado, mmemme mmekọ na-enweta omume nchọgharị nke onye ọrụ iji guzosie profaịlụ nke onye ọrụ ma gosipụta mgbasa ozi onye ọrụ dabere n'ọchịchọ na omume nchọgharị ha. Ihe omuma a bu ihe anaghi ama mgbe niile na onye choputaghi ya.
Ozi enyere na saịtị ndị a nkwado ma ọ bụ njikọ jikọtara ha dabere na iwu nzuzo nke ejiri saịtị ndị ahụ ma ọ gaghị n'okpuru iwu nzuzo a. Ya mere, anyị na-akwado ndị ọrụ ka ha nyochaa n'ụzọ zuru ezu na iwu nzuzo nke njikọ njikọ.
Amụma Nzuzo nke mgbasa ozi enyere na Adsense: Google Adsense.
Amụma nzuzo nke ụzọ nsuso eji saịtị a:Google (Nchịkwa)
Discover.online na-amukwa ihe ndi choro choro, omume ha, omume ha, na ozi ndi ozo iji ghota nke oma ndi mmadu bu. Nyochaa mmasị ndị ọrụ anyị na-enyekwara anyị aka igosi gị mgbasa ozi kachasị mkpa.
Onye ọrụ ya na, n'ozuzu ya, onye ọ bụla sitere n'okike ma ọ bụ onye iwu kwadoro, nwere ike ịmepụta njikọ njikọ ma ọ bụ njikọta teknụzụ (dịka ọmụmaatụ, njikọ ma ọ bụ bọtịnụ) site na weebụsaịtị ha iji achọpụta.online ("Hyperlink"). Ntọala nke Hyperlink apụtaghị na ịdị adị nke mmekọrịta dị n'etiti Disco.online na onye nwe saịtị ma ọ bụ ibe weebụ nke Hyperlink guzobere, ma ọ bụ nnabata ma ọ bụ nnabata site na Disco.online nke ọdịnaya ya ma ọ bụ ọrụ. N'ọnọdụ ọ bụla, Discover.online nwere ikike igbochi ma ọ bụ gbanyụọ hyperlink ọ bụla na weebụsaịtị n'oge ọ bụla.
Izi ezi na izi ezi nke data
Onye ọrụ ahụ na-ekwe nkwa na data nkeonwe nke enyere site n'ụdị dị iche iche bụ eziokwu, na-akwụ ụgwọ iji kọọrọ ha mgbanwe ọ bụla. N'otu aka ahụ, Onye ọrụ na-ekwe nkwa na ozi niile enyere dị ka ọnọdụ ha si dị, na ọ dị ọhụrụ ma zie ezi. Na mgbakwunye, Onye ọrụ ahụ na-agba mbọ idobe data ha oge niile, na-akpata naanị maka ezighi ezi ma ọ bụ ụgha nke data enyere yana maka mmebi nke nke a nwere na Online Servicios Telemáticos SL dị ka onye nwe weebụsaịtị ahụ na-achọpụta.online.
Mmega ikike nke nnweta, ndozi, kagbuo ma ọ bụ mmegide
Ikike nke ndị ọrụ bụ ndị a:
Ikike ịjụ ihe data nke anyị chekwara gbasara Onye ọrụ n'oge ọ bụla.
Ikike ịrịọ anyị ka imelite ma ọ bụ dozie maka data ezighi ezi ma ọ bụ nke gara aga nke anyị na-echekwa banyere Onye ọrụ.
Ikike wepu aha na nkwukọrịta ahịa ọ bụla anyị nwere ike zigara Onye ọrụ.
You nwere ike iduzi nkwukọrịta gị ma jiri ikike nke nnweta, idozi, kagbuo ya na mmegide Site na nzipu ozi na C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) ma ọ bụ site na e-mail: info (na) Discover.online yana ezigbo akaebe na iwu, dị ka foto nke DNI ma ọ bụ ihe nhata, na-egosi na isiokwu "nchekwa data".
Onye ọrụ ahụ kwupụtara na a gwala ya ọnọdụ gbasara nchekwa nke data nkeonwe, ịnakwere na nkwenye na ọgwụgwọ ya site na Online Servicios Telemáticos SL n'ụzọ na ebumnuche ndị egosiri na ọkwa iwu.
Mgbanwe na iwu nzuzo a
Online Servicios Telemáticos SL nwere ikike ịgbanwe iwu a ka ọ gbanwee ya na iwu ọhụrụ ma ọ bụ iwu na ọrụ ụlọ ọrụ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, Onye na-eweta ga-ekwupụta na ibe a mgbanwe ndị ewebata na atụmanya ezi uche dị na ya maka mmejuputa ha.
Dabere na LSSICE, Online Servicios Telemáticos SL anaghị arụ ọrụ SPAM, n'ihi ya, ọ naghị eziga ozi ịntanetị nke onye ọrụ na-arịọbeghị ma ọ bụ nye ikike na ya, n'oge ụfọdụ, ọ nwere ike izipu nkwalite nke ya na onyinye a kapịrị ọnụ na ndị ọzọ, naanị na ikpe ebe ịnwere ikike nke ndị nnata. N'ihi ya, n'ụdị nke ọ bụla na weebụsaịtị, Onye ọrụ nwere ohere ịnye nkwenye nkwuputa ha ịnata "Akwụkwọ Akụkọ" m, n'agbanyeghị ozi azụmahịa a rịọrọ n'oge. I nwekwara ike ịkagbu na ndenye aha gị na akpaghị aka n'otu akwụkwọ akụkọ ahụ.